समन सञ्जीवको ‘डम्फूको ताल राम्रो’ सार्वजनिक – Idea Khabar
Englishमनाेरञ्जनरोचकविशेषसफलता को कथा
आइडिया खबर२०७५ भाद्र ३, आईतवार १५:३८
काठमाडौं । गायक समन सञ्जीव तामाङले भर्खरै अर्को नयाँ गीत ‘डम्फुको ताल राम्रो’ सार्वजनिक गरेका छन् । हालै गीतको म्यूजिक भिडियो सामाजिक सञ्जाल युट्युवमार्फत ‘डम्फूको ताल राम्रो’ सार्वजनिक भएको हो ।
सार्वजनिक गीतले आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । तामाङ संस्कृतिका डम्फू, डुङ्नाको धुन, मैच्याङको रुप, सेलो भाका, ल्होसार पर्व लगायतलाई स्मरण गरिएको छ । समन सञ्जीवको स्वर रहेको गीतमा शब्द तथा संगीत भने टीका बोम्जोनको रहेकोछ । सार्वजनिक गीतको म्यूजिक भिडियोमा कलाकार विमल र सविताले अभिनय गरेका छन् । त्यस्तै दीपेन्द्र भट्टको छायांकन रहेको उक्त भिडियोमा सम्पादन समेत भट्टको रहेको छ ।
एमबी गुरुङको निर्देशनमा तयार भएको म्यूजिक भिडियोलाई सिने क्र्यू मिडियाले बजारमा ल्याएको हो । गीतका शब्द निकै राम्रो रहेको र गीत दर्शक तथा श्रोताको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुने गायक समनले विश्वास लिएका छन् । गायक सञ्जीवले यसअघि ‘विदेशिएँ आफ्नै गाउँघर छोडी’ र ‘संसार तिम्रै’ बोलको गीत बजारमा ल्याएका थिए । सुरिलो श्वरका धनी सञ्जीवले आफ्नो यस अघिको गीतमा विदेशी भूमिमा भोगेका पीडा र यस्ता पीडाले गराउने मातृभूमिप्रतिको मायालाई पस्केका थिए ।
२०७५ कार्तिक ११, आईतवार २१:०२
२०७६ आश्विन ३, शुक्रबार ०९:३४
आइफा अवार्डमा बलिउडका कलाकारका लागि एक अर्ब दिने !
२०७६ असार १८, बुधबार ११:०३
अमेरिकामा सात महिने बालक मेयर, यसरी लिए सपथ ?
२०७६ पुष ४, शुक्रबार १३:३०